Bashir Maxamed | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Bashir Maxamed, July 27, 2020
Doorashooyinku waa dariiqa xalaasha ah ee loo maro isbedelka awoodeed ee dalalka dimuqraadiyadu ka hanaqaaday. Laakiin doorashooyinku ma damaanad qaadaan xallinta mashaakil oo idil mar mar waaba ay sii xoojiyaan xurguftii jirtay. Waxa suutro gal ah in doorashooyinku noqdaan qaar xor ah aanse xaq ahayn. Doorashooyinku waa udub dhexaadka dowladaha wakiilada dimuqraadiga sabab? Sababtoo ah dimuqraadiyad ahaan, awoodda dowlada waxa ay ka timaadaa ogolaanshaha kuwa la xukumayo. Waana hanaan bulshadu ku go’aamiso cida iyaga u matali lahayd nidaamka dowladnimo. Dimuqraadiyada wakiiladu waa mid ka mid ah ujeedooyinka bulshooyinka casriga ah. Wakiiladu baarlamaanku waxa ay leeyihiin saddex hawlood; metelaada doortaha, sameynta …
Ku talagalka miisaaniyadda ‘budget estimation’ Somaliland ee 2020-ka waxa isdhin maaliyadeed oo xoogle “intensive fiscal deficit” iyo hoos u dhac weyn “magnific deceleration” oo la taaban karro ku keenaya xanuunka safmareenka Korona Fayras COVID19. Sanadkii 2019, 10-kii bilood ee hore dakhliga u soo xorooday dowladda Somaliland waxa uu dhanaa $174 Million oo macnaheedu tahay in bil wal dakhliga soo galayay uu ahaa $17.4 Million. Halka yoolka Sanadkan odoroska dakhligu bil walba yahay $26 Million in uu soo xoroodo. Dakhliga miisaaniyadu waxa uu ka Kooban yahay cashuuraha, khidmadaha iyo kaalmooyinka deeqaha. Miisaaniyadda SL ee 2020 waa $323 Million (budgeted estimate- rate …
Waa hubanti la’aan in aynu il-gaara ku eegayno daruuraha is-fahan siyaasadeed ee waddamada Geeska Afrika, oo isbedel iyo is-fahan kasta oo dhaca raad innagu yeelanayo ka bulsho ahaan. Si kooban haddaan u iftiimiyo ujeedada qormada cinwaankeedu kor ku xusan yahay; waa mid aan doonaayo inaan ogaalka bulshada kor ugu qaado. Maqaalkan waxa aan idinku la wadaagi doonaa aragti caam ahaan loo fahansanaan karo oo aan ka soo dheeganayno isbedelada siyaasadeed ee geeska afrika ka cartamaya xilligan, mareegaha falanqeeya arrimaha mandaqada khaas ahaan iyo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda. Waxa aan akhristaha ugu afeef dhiganayaa inaan qormadan ku hadlayo aragti iyo dareen ku …
Muqdisho waxa ka jirra duruufo waaweyn oo amni darro oo culayskooda leh, Muqdisho waa magaallo nasiib darran, oo ayaankeed/filkeed in badan ka hadhay ! Magaalo ahaanteed uma xuma, oo shaki la’aan waa BOQORADII CASRIGA ; laakiin muuqaaladda qaraxyadda ka jira ayaa sawir fool xun ku ladhay !! Saraakiisha loo xidhay laylinta Ciidanka Xoogga Dalka, ilaalinta Amniga Caasimadda iyo Sirdoonka Qaranku, qorshe midho dhal ah iyo siyaasadda amni oo duruufaha xaailooni darro ee weerarada argagixisadda lagaga dabaasho weli hab iyo xeelad guul dhal ah ma aysan sal-dhigin. Duruufaha nabadgalyo xumo ee caasimada hanaan iyo xeelad lagu karantiilo weli lama hayo. …
Inuu qallinku qeexo weedha cinwaanka kor ku qoroni, uma baahna raadsashada cadaymo ama qiil samayn, balse waayaha taariikhda iyo wacdiga noloshii la soo maray ayuun baynu bogogeeda ay dhaxalka uga tagtay caruur iyo cirroole ka dhex akhrisanaynaa dhacdooyinkii madoobaa ee maanka iyo qalbiyadda raadka ku reebay. Waa waajib iyo lagama maarmaan in wax laga ogaado wixii tegay ee taariikhda baalka madow ka galay “Taariikhdu waxbay Hagtaa; Dadkuna Waa Haybiyaa”. Sooyaalku ma duugoobo, deegaan wal iyo dad kastaana waxay leeyihiin maalmo madow iyo maalmo farxadeed oo ay xasuustaan. Wixii dhib ah ee shacab ku dhacayna waxa ay taariikhdu u xustaa ama …